Sidee ayay ku timid magacaabistii Cumar C/rashiid (Xasan Sh. oo gees isaga riixay Faarax) - iftineducation.com
Sidee ayay ku timid magacaabistii Cumar C/rashiid (Xasan Sh. oo gees isaga riixay Faarax)
iftineducation.com – Ilo xog-ogaal ah oo arrintan aad ula socday ayaa sheegay in Cumar Cabdirashiid la magacaabay kadib markii ay beesha caalamka taageertay, taasi oo ka dambeysay markii kooxda Xasan Sheekh ku xeeran ay isku qabsadeen qofka ra’iisul wasaare noqonaya.
Sharii Xasan Sheekh Aadan iyo Cabdullahi Sambaloolshe oo dhinac ah iyo Faarax C/qaadir oo dhinac kale ah ayaa kala watay Cumar Cabdriashiid iyo Xuseen Cabdi Xalane. Sidoo kale, dad kale oo iyana ku dhow madaxweynaha ayaa soo jeediyey Fowsiya Yuusuf Xaaji Aadan iyo Mahad Cawad.
Xasan Sheekh, ayaa markii ugu horreysay ku dhiiraday in talada Faarax C/qaadir oo ahayd magacaabista Xuseen Xalane uusan qaadan, sababo la xiriira in Shariif Xasan iyo Sambaloolshe ay sidoo kale iminka aad ugu dhow yihiin madaxweynaha.
Madaxweynaha, ayaa kaddib wada tashi dheer waxa uu go’aan ku gaaray in maadaama labada ninba ay kala wataan dhinacyo isaga ku dhow uu arrintan u bandhigo beesha caalamka, si loo ogaado fikirkooda ku aadan Xuseen Cabdi Xalane iyo Cumar Cabdirashiid. Waxaa sidoo kale dadka la bandhigay lagu daray Fowsiya Yuusuf iyo Mahad Cawad, si loogu ekeysiiyo in dad dhowr ah oo haweeney ay ku jirto fursad la siiyo.
Beesha caalamka ayaa la sheegay in durbadiiba ay soo celisay Fowsiya iyo Mahad Cawad, balse ay waqti u qabsatay Xuseen Xalane iyo Cumar Cabdirashiid. Maalmo kadib, waxa ay beesha caalamka ku talisay in la magacaabo Cumar Cabdirashiid, uuna yahay nin ay la shaqeyn karaan, isna fahmi karaan.
Madaxweynaha ayaa Faarax C/qaadir ku qanciyey in taageerada caalamka muhiim ay u tahay dowladda, sidaa darteedna uu magacaabayo Cumar Cabdirashiid.
Ilo-wareedyada ayaa waxay sheegayaan in beesha caalamka ay u doorteen Cumar Cabdirashiid sababo la xiriira in Xuseen Cabdi Xalane uu aad ugu dhow yahay madaxweynaha, sidaa darteedna ay u arkeen Cumar mid ayaga si gaar ah ugu xirnaan kara.
“Beesha caalamka jaceyl kuma dooran Cumar Cabdirashiid, ee ku xumeyn Xasan Sheekh ayay u doorteen, sababta oo ah Xuseen aad ayuu ugu dhow yahay madaxweynaha, xitaa subax kasta waa wada quraacdaan” ayuu yiri qofka diiday in Magaciisa la shaaciyo .
Madaxweynaha ayaa Xuseen Cabdi Xalane u cudur daartay una ballan qaaday ra’iisul wasaare ku xigeen iyo jago wasiir oo aad u sarreysay. Waxaa sidoo kale Xuseen Xalane shalay xaflad qancin ah u sameeyey beesha madaxweynaha. Halkan ka arag sawirrada.
Daaw wiilkaan wuxuu ahaan jiray shabaab wuxuuna ka shifay sir wayn oo ku saabsan qaabka shaqo ee shabaabka
Nin lagu eedeeyay maalgelinta Al-shabaab oo lagu xukumay Mareynkanka .